Telegram: Warar, shaqooyin iyo faa iidooyin ilaa nooca hadda jira | Laga soo bilaabo Linux
Telegram: Wararka, shaqooyinka iyo faa iidooyinka ilaa nooca hadda jira
Linux Post Ku Rakib | | La cusboonaysiiyay 25/03/2019 18:11 | Aplicaciones
Telegram 1.6: Maxaa ku cusub barnaamijka fariimaha ugufiican
WhatsApp badanaa waxaa loo tixgeliyaa barnaamijka ugu caansan, baahinta iyo isticmaalka fariimaha, waana suurtagal inay tahay, laakiin taasi macnaheedu maahan inay kafiican tahay suuqa ama ugu waxqabadka badan ama shaqeynaya dhammaan nidaamka deegaanka ee codsiyada fariimaha jira. Telegram-na waa badel aad ufiican oo kaladuwan oo loo adeegsado kaabe ahaan iyo bedelida WhatsApp.
Si kastaba ha noqotee, kuwa jecel kuwa beddelka ah, fursadaha, ka-hortagga xilligan, waxay leeyihiin awooddooda Barnaamijyada kale sida: ChatON, Facebook Messenger, Hangouts, KakaoTalk, Kik Messenger, Line, LiveProfile, Skype, Snapchat, Tango, Telegram, Viber, WeChat, Wire, iyo kuwo kale oo badan. Kiiskeena, waxaan diirada saari doonaa Telegram, codsi ama adeeg fariin oo uu abuuray Pável Dúrov.
2.1 Waa maxay Telegram?
2.3.2 Tusmada iyo Farriimaha
2.3.3 Xiriirada iyo Xisaabaadka
2.3.4 Wadahadal, Kanaallo, Kooxo iyo Super-kooxo
Telegram, ayaa dhawaan mar kale booday mar kale isagoo ku daray saddex milyan oo isticmaaleyaal cusub oo diiwaangashan, iyadoo ay socdaan shilalkii ugu dambeeyay ee Facebook, Instagram iyo WhatsApp. Waa kuwee, oo soo xiganaya ereyada abuure, sidoo kale loo yaqaan «Ruushka Zuckerberg»:
Taasi waa wanaagsan tahay. Waxaan leenahay asturnaan dhab ah iyo meel aan xad lahayn qof walba.
Xaaladdeenna, Blog-ka DesdeLinux, maahan markii ugu horreysay ee aan ku hadalno, kugula talinno oo aan baro sida loo rakibo loona isticmaalo qalabkan. Maaddaama aan hayno qoraallo hore oo wanaagsan oo ku saabsan, sida: Sidee loo rakibaa Telegram-ka Linux? waxaa qoray David Naranjo iyo Tilmaamaha lagu rakibayo Waqtiga saanbaaraha, Spotify iyo Telegram ee DEBIAN qoraalkayga.
Marka daabicidan ma diirada saari doonno farsamada qotoda dheer, laakiin dhab ahaan dalabka dhabta ah, taasi waa in la yiraahdo, wararka, shaqooyinka, iyo faa'iidooyinka ugu caansan illaa nooca hadda jira.
Waa maxay Telegram?
Kuwa aan gebi ahaanba ka warqabin codsigan iyo adeegga farriinta, waxaan uga dhigi karnaa si cad oo toos ah, adiga oo tixraacaya adiga website-ka rasmiga ah, taas oo ah:
Barnaamij fariin oo diiradda lagu saaray xawaaraha iyo amniga, waa mid deg deg badan, fudud oo bilaash ah. Waxaad ku isticmaali kartaa Telegram dhammaan qalabkaaga isla waqtigaas. Fariimahaaga si habsami leh ayaa looga wada shaqeeyaa mid ka mid ah taleefannadaada, kiniiniyada ama kombuyuutarkaaga.
Telegram, waxaad ku diri kartaa farriimo, sawirro, fiidiyowyo iyo feylal nooc kasta ah (doc, zip, mp3, iwm), sidoo kale waxaad abuuri kartaa kooxo gaaraya ilaa 200 oo qof ama kanaalo si ay ugu baahiyaan dhagaystayaal aan xad lahayn. Waxaad wax ugu qori kartaa xiriirada taleefankaaga oo aad dadka kaga heli kartaa magacooda. Natiijo ahaan, Telegram waa sida SMS iyo emayl la isku daray, waxayna la kulmi kartaa dhammaan baahiyahaaga shaqsiyeed ama fariin ganacsi. Intaa waxaa sii dheer, Telegram waxay bixisaa wicitaano cod ah oo leh qarsoodi-ilaa-dhamaadka.
Iyo wixii kordhin guud ah ee ku saabsan arjiga la yiri, way fiicantahay in si toos ah loola tashado qaybta su'aalaha ee isbaanishka, oo aad ku leedahay boggaaga. In kasta oo ay mudan tahay in la xuso in bilowgii Telegram uu ahaa oo keliya mid yar oo fudud taleefanka moobiilka oo inyar iyo inyar ayay u samaysatay inuu yahay qaab adag oo adag oo qaab-dhismeed badan leh, taas oo ah, in lagu isticmaali karo Nidaamyada Hawlgalka ee ugu muhiimsan (Android, iOS, MacOS, Windows, GNU / Linux) iyo daalacashada shabakadaha (Chrome, Firefox, Opera, iyo kuwo kale).
Waxaa la sameeyay 2013, Telegram oo hada kujira qaabkiisa desktop-ka ee GNU / Linux wuxuu kujiraa nooca 1.6.2 halka mobile-ka Android ay kujirto nooca 5.5.0. Waxay u adeegsaneysaa tikniyoolajiyada 'MTProto' kaabayaasheeda waxaana ka mid ah howlaha caadiga ah iyo kuwa aasaasiga ah ee nooc kasta oo nooceeda ah, mid gaar ah iyo / ama astaamo hal abuur leh sida isticmaalka istiikarada (jaantusyada) iyo bootooyinka (aalado otomaatig ah oo la hagaajin karo), iyo tiro sii kordheysa oo adeegyo ah. in la kordhiyo oo la xoojiyo tayada waayo-aragnimada isticmaaleheeda.
Xilligan Telegram-ka noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay barxad kasta (Desktop, Mobile, Web) waxaa ku jira ama lagu darayaa astaamaha cusub ee soo socda:
Samee wicitaano fiidiyoow ah
Shaashadda maaraynta kooxeed cusub iyo mid hagaagsan: Waxyaabaha kale ee hadda kuu oggolaanaya inaad ku isticmaasho raadinta goobaha si aad uga hesho xulashooyinka iyo talo soo jeedinta su'aalaha badanaa la isweydiiyo.
Maareynta wanaagsan ee Emojis: Markay timaado awoodda, raadi emojis, GIFs, iyo istiikarada kujira guddiga dib loo naqshadeeyay. Ka hel talo soo jeedinta emoji ereyga ugu horreeya ee aad farriinta ku qorto. Arag emojisyada waaweyn farriimaha ay kujiraan emojis oo keliya kuna raadi istiikarka adoo adeegsanaya ereyo (ku saleysan emoji ugu habboon).
Maareynta farriinta la dheereeyay: Hadda shaqeynta tirtirka farriimaha waa la ballaariyay, iyada oo la gaarayo tirtiridda fariin kasta oo loogu talagalay labada isticmaale ee ku jira sheeko kasta oo gaar loo leeyahay, markii loo baahdo. Xakamee in fariimahayagu ku xirnaan doonaan koontadayada markii la dirayo.
Loo maqli video toos ah: Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ciyaarto fiidiyowyo adigoon soo dejin oo aad u ciyaarto kuwa yar yar oo aan dhawaaq lahayn marka shaashadda lagu soo bandhigo, iyadoo ikhtiyaar u leh inaad dhaqaajiso codka, si fudud adigoo riixaya badhanka mugga ee qalabka. GIF-yada iyo farriimaha fiidiyowga sidoo kale waa la daawan karaa iyadoon la sugin inay si buuxda u soo dejistaan.
Soodejinta otomaatiga ah: Kuu ogolaanayaa inaad gacanta ku habayn soo bixi otomaatig ah nooca sheekaysiga, nooca warbaahinta, iyo cabirka faylka. Xusuusashada ikhtiyaarrada loo dejiyey sidii hore loogu talagalay haddii ay dhacdo inaad u baahato inaad si ku meelgaar ah ugu beddesho hoose iyo ka soo horjeed, ama dhinaca kale.
Taageero badan oo xisaabeed: Kudar taageerida wada noolaanshaha dhowr lambar taleefan iyo akoonno badan oo Telegram ah oo hal codsi ah (Desktop, Mobile, Web), sidaasna u fududeynaya maareynta koontooyinka badan iyo kuwa dhexe
Maareynta kalfadhiga isticmaalaha firfircoon: Waxay fududeyneysaa caadada bannaanka, ma aha wax daruuri ah oo waxtar u leh Telegram, iyada oo sameynta liistada bixitaanka ay hadda muujineyso dhowr ikhtiyaar oo kale oo lagu xiro kalfadhiga firfircoon.
Sawirka astaanta: Hadda Telegram wuxuu u oggolaanayaa isticmaale kasta inuu haysto ilaa 2 sawir oo muuqaal ah. Mid xiriirada diiwaangashan iyo mid ka duwan kan dadka intiisa kale. Taas oo ka dhigan dheeri dheeraad ah xulashada caadiga ah si loo qariyo sawirka astaanta ah ee aan ka heli karno barnaamijyada fariimaha kale. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan xakameyno cidda arki karta sawirkeena muuqaalkeena.
Fariinta gudbinta: Waxay awood u siineysaa hawsha gudbinta farriinta qof mamnuucay. In nuqul laga sameeyo iyada ayaa la diray, oo aan lagu darin suurtagalnimada marin u helka astaamaha qoraaga iyo sameynta xaqiiqadiisa. Intaas waxaa sii dheer, Aqoonsiga isticmaale ee fariinta la soo gudbiyey waa la jari karaa, maadaama ay tahay fariin la soo gudbiyey.
Kuwa kale ee muhiimka ah: Wareeji shaashadda si aad ugu beddesho qaabka shaashadda oo dhammaystiran markaad daawanayso fiidiyowga otomaatiga ah ee codka leh. Soo gal qayb kasta oo ka mid ah barnaamijka adoo adeegsanaya TalkBack. Iyo hagaajinta tayada wicitaanada la sameeyay.
Xilligan Telegram-ka noocyadiisa kala duwan ee barnaamij kasta (Desktop, Mobile, Web) wuxuu leeyahay shaqooyinka soo socda (astaamaha):
Wac wicitaano, dir codad qoraal ah iyo fariimo fiidiyoow ah.
Ku qor arjiga lambarka PIN ama sawirka faraha.
Isku habeyn otomaatig ah muddo cayiman.
Taageerada otomaatigga ee habka loo maro tikniyoolajiyadda IFTTT.
Baadh internetka adigoon ka tagin dalabka, mahadnaqa boggaga internetka ee gudaha.
Hesho ogeysiisyo riix ah oo awood u leh inaad ku habeyso xiriir kasta oo diiwaangashan.
Ikhtiyaarrada amniga ee la maareynayo: Kumaa arki kara xiriirkeenna ugu dambeeya? iyo yaa nagu dari kara koox? si loo joojiyo adeegsadayaasha loona habeeyo xulashooyinkaas.
Adeegsiga aaladda Telegraph, si loo abuuro maqaallo (farriimo dhaadheer / dhaadheer) si loo fududeeyo diristooda iyo daawashadooda (Muuqaalka Degdegga ah) iyada oo loo marayo sheeko ama kanaal.
U dir goobtayada waqtiga dhabta ah, si dadka kale ay u ogaadaan goobtayada saxda ah waqti cayiman X.
Iswaafajin joogto ah oo ka kooban daruuraha (Internetka) si fudud oo dhaqso leh looga helo qalabyada kala duwan ee la isticmaalay.
Barnaamij noocee ah faylasha ah oo si otomaatig ah u soo dejisan doona waxay kuxirantahay nooca kanaalka isku xirka internetka (Wired, Mobile ama Wi-Fi), si looga caawiyo in la kharash gareeyo xog yar iyo in si fiican loo kantaroolo waxa ku baxay.
Raadi farriimaha taariikhda, laga bilaabo sheeko gaar ah, adigoo riixaya goobaha / raadinta / kalandarka. Qalab aad u fiican oo lagu raadiyo macluumaad duug ah.
Barnaamijyo aan rasmi ahayn oo isku daraya hawlo taxane ah oo aan xagjir ahayn laakiin hagaajinaya khibradda adeegsadaha ee wanaagsan ee ku jirta abka rasmiga ah.
Adeegsiga bootooyinka (aalado otomaatig ah oo iskiis u roon) oo loo diyaariyey inay fududeeyaan hawl kasta. Oo ay ku jiraan jiritaanka tiro aad u tiro yar oo ciyaaro yaryar ah, qaar iyaga ka mid ah oo leh tayo aad u wanaagsan, oo ay ugu mahadcelinayaan barta wanaagsan ee bot, gaar ahaan @gamebot iyo @gamee bots.
Telegram ma haysto oo wax macquul ah waligiis ma xayeysiin doono, halka WhatsApp laga yaabo inuu ku daro waqti kasta maxaa yeelay waa codsi ganacsi oo hadda ay leedahay shirkadda Facebook.
Kuu ogolaanaya sixitaanka otomaatigga ah si loo cuno (loo soo dejiyo) xog yar oo loogu talagalay isticmaaleyaasha degan waddamada leh kharashyada xogta badan Ku darista awooda inaad eegto oo aad kala bedesho qiimaha u hooseeya ee Dhexdhexaad, Dhexdhexaad iyo Heer sare sida ku cad habka soo dejinta ee firfircoon (Mobile, Roaming iyo Wi-Fi).
Tusmada iyo Farriimaha
Tafatir oo tirtir fariimaha horey loo diray.
Ku samee raadinta caalamiga ah waxyaabaha ku jira.
Keydso dulucda sheekooyinka, oo ay ku jirto taariikhda.
Maamul animation, maqal, muuqaal, qoraal iyo fiidiyoo fiidiyow ah, illaa 1.5 GB, dhammaantoodna ka imaado interface aad u fudud oo iswaafajin ah.
Ku keydi fariimo qabyo ah, oo waxtar leh si aad u bilawdo fariin, tusaale ahaan, mobilkaaga, kuna dhammee kombiyuutar ama mobiil kale hadhow, ka dibna u dir.
Ikhtiyaariyada fariimaha la kaydiyay, taas oo kuu ogolaanaysa inaad la sheekaysatid naftaada, oo markaa si toos ah si dhakhso leh ugu dir nooc kasta oo faylal ah isla markaana aad u waafajiso qalabka oo dhan
Xiriirada iyo Xisaabaadka
Adeegso buugga taleefanka gacanta si aad u hesho xubnaha Telegram.
Jadwalka jadwalka otomaatiga-baabi'inta ama xannibaadda koontada Telegram ka dib muddo aan shaqeyneyn, oo u dhexeysa bil illaa sannad.
Adeegso magac kale oo aan ahayn Magaca, isla markaana u adeegso isla si aad u hesho dadka kale oo aad awood ugu yeelan karto inaad toos ula hadasho. Tani waxay iska ilaalinaysaa inay siiso lambarka taleefonkeena si ay hadhow noo soo wacaan iyaga oo aan rabin inay sidaas yeelaan.
Ku lifaaq album album sawir ah astaanta akoon kasta oo arag sawirradii hore ee la aasaasay.
Adeegso akoonno fara badan (illaa 3 lambar taleefan) oo si fudud ugu kala beddel iyaga oo aan kala goyn. Marka lagu daro helitaanka ogeysiisyada riixitaanka dhammaan akoonnada lagu qaabeeyey macluumaadka ku saabsan koontada loo diray. Oo hel horudhac liiska wada sheekaysiga akoonka, adoo taabanaya kuna haya qaybta dejinta.
Wadahadal, Kanaallo, Kooxo iyo Super-kooxo
Hirgelinta kanaallada warfaafinta, kooxaha iyo kooxaha waaweyn. Kuwani waxay noqon karaan kuwo caam ah ama kuwo gaar loo leeyahay, tan dambana waxaa keliya oo lagu heli karaa iyada oo loo maro isku xirka martiqaadka (URL), waa la hagaajin karaa, haddii kooxdu tahay mid guud.
Ogow kooxaha ay wadaagaan isticmaale kale isla markaana ka raadi kooxaha qaybta raadinta.
Ku hagaaji (barroosinka) farriimaha ku jira madaxa kanaalladaada iyo kooxaha aad maamusho ama aad maamusho. Waxaa ka mid ah awood u lahaanshaha inaad ku xirto booska koowaad ee liiska wada sheekaysiga si aad uhesho sheeko gaar ah
Abuur sheekaysi qarsoodi ah oo leh suurtogalnimada dirista farriimaha waqtiga is-halaagga, iyo dirista sawirrada, gifs ama istiikarka leh taariikhda uu dhacayo.
Beddel warqadda gidaarka ee Wadahadalka oo ku dabakh mawduucyo dhammaystiran oo ku saabsan arjiga. Marka lagu daro awoodda aan u leenahay abuuritaankeenna, haddii aynaan jeclaan mid ka mid ah liistada ballaaran ee mawduucyada la heli karo.
Ku qor farriimo far ama far ah si fudud adigoo u dhigaya kahor iyo gadaal eray kasta / weedh kasta xiddig laba jibbaar ah (**) oo geesinimo leh, xarfaha (__) loogu talagalay farta iyo saddexda xigasho («` `) ee loo yaqaan 'monospace'.
U habee cabirka qoraalka, laga bilaabo cabbirka 12 illaa cabirka 30, kuwa doorbida qoraallada leh xarfaha xarfaha cabbirkoodu isbaddallo.
Si otomatig ah u cabbir sawirrada cabbir gaar ah iyo qaab gaar ah.
Kudar ama abuur tabeelooyin (istiikarada), kuwaaga ama kuwa kale.
Ka daawo fiidiyowyada YouTube-ka daaqadaha dul sabeynaya, mahadnaqa Sawirka ee qaabka Sawirka.
U isticmaal Telegram sida ciyaariyahan warbaahin badan (Audio / Video), oo kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto dhowr faylal isla mar ahaantaana loop ama si aan kala sooc lahayn.
U dir kooxo sawirro ah oo dooro amarka dirista, adoo gujinaya iyaga si ay u maareeyaan lambarrada tilmaamaya amarka dirista.
Ka abuur fiidiyooga fiidiyowyada la soo diray, fiidiyoow la dirayo iyo aamusinta, ka dibna u keydso sidii feyl Gif ah. Ku raadi iyaga dhex sheekaysiga adiga oo riixaya astaamaha xiidanka (:) kahor eray la xiriira.
Adeegso tifaftire sawir ah oo u oggolaanaya, waxyaabo badan, inaad wax ka beddesho dhalaalka, midabka, kala-duwanaanta, isku-darka iyo ku dar vignettes. Waxa intaa dheer in lagu daro walxaha sida muraayadaha, koofiyadaha, wigyada iyo dhammaan noocyada lagu daro sawirada lagu abuuray wejigeena iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada aqoonsiga wajiga.
Soo koobid kooban waxaan dhihi karnaa waa codsi:
In isagu had iyo jeer safka hore kaga jiro isbedelada, shaqooyinka iyo sixitaanka lagama maarmaanka ah oo ay codsadaan bulshada. Gaar ahaan heerka asturnaanta iyo sifooyinka amniga.
Waa asal Ruush mana aha Waqooyiga Ameerika, taas oo muujinaysa nabadgelyo iyo asturnaan dheeri ah, marka loo eego waajibaadka ka saaran arrintan ay ku soo rogtay dowladda Waqooyiga Ameerika heer caalami.
Waxay cunaysaa ilo yar, batteri yar, xasuusta yar ee kumbiyuutarada iyo aaladaha ay ku rakiban yihiin ama ku shaqeeyaan.
Cida API-da iyo borotokoolkeeda isgaarsiintu "waa lacag la'aan" (Furan Furan) waana bilaash.
Telegram, tan iyo markii la aasaasay, wuxuu leeyahay fursado badan, hagaajin iyo qalab ka badan WhatsApp. Haatana inkasta oo aanu ahayn codsigii ugu horreeyay ee suuqa, aaladaha, ama adeegsadayaasha, adeegsigiisa, aqbalaadda iyo aqoonsiga bulshada caalamku maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii kordhayaa, gaar ahaan mabaadi'da aasaasiga ah sida helitaanka. , casriyeynta, hal-abuurka, amniga iyo asturnaanta.
Sikastaba, hada oo aad waxbadan ka garaneyso Telegram, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad kusoo biirto, rakibto, tijaabiso oo aad ku dhiirrigeliso dadka aad la xiriirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Telegram: Wararka, shaqooyinka iyo faa iidooyinka ilaa nooca hadda jira
Maxaan ku dari karaa maqaalkan weyn? In qof kasta oo raba ama xiiseynaya inuu ogaado waxa Telegram yahay, WAA INAAD akhrisataa.
Sida had iyo jeer, aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga wanaagsan, waana ku faraxsanahay inaad ka heshay. Waxaan rajeynayaa inay u adeegi doonto si inbadan oo ka mid ahi wax uga ogaadaan oo si tartiib tartiib ah ugu soo haajiraan dhankaas mustaqbalka dhow.
codsi aad u wanaagsan, laakiin…. Kuma raacsani qodobka 2aad ee faa iidooyinka, amni malahan gabi ahaanba, si sax ah maxaa yeelay Ruushku waxay aad uga badanyihiin ama ka badanyihiin burcad badeedka Yankees, marka, hadaad kahadasho amniga, gacmaheyga dab ma aanan dhigin waqtigaas.
Waan fahamsanahay waana ixtiraamayaa aragtidaas ... waxaan ku dari lahaa oo kaliya waxa aan ku doodayo, in inta aan ogahay, abuuraha iyo codsigiisa, in kasta oo ay yihiin Ruush, isla masuuliyiinta Ruushku ay dagaal ku qaadeen maxaa yeelay iyagu si cad umay dhiibin dalabyada isku mid ah, si ay u awoodaan inay marin u helaan farriimaha adeegsadayaasha qaab rasmi ah, taas oo aan ahayn wax la malayn karo ama lagu kalsoonaan karo dhinaca kale oo la soo diro codsi kasta oo farriin ah, maxaa yeelay illaa inta aan wada qiyaaseyno, si rasmi ah ama aan ahayn, waxay helayaan ama uma oggolaan jirin inay shaqeeyaan, maaddaama ay ku shaqeeyaan dhib la'aan ama dalab la'aan maanta. Marka haddii aan xisaabta ku dareyno in Telegram uusan si rasmi ah u siinin amniga iyo asturnaanta dowladda Ruushka, uguyaraan faa iidada shakigu leeyahay, sax?
Maqaal aad u fiican. Aniga ahaan Telegram waa codsi ugu wanaagsan ee farriinta xilligan la joogo.
Anigana sidoo kale, haddii aan doonayo inaan buun-buuniyo arrimaha gaarka ah iyo amniga waxaan isticmaali lahaa calaamado.
Calan ma aqaan. Waan tijaabinayaa.
Waxaan haystay Telegram muddo dheer, laakiin runtu waxay tahay, ma isticmaalo. Maalintii kale ee aan galay waxaan arkay in aan xiriir la leeyahay Telegram oo aanan garanaynin cidda uu yahay, kuma jiro buuggayga taleefankayga, mana garanayo cidda uu yahay, Dhammaan dadka lala xidhiidhayo waxay ku qoran yihiin waraaqo madow tanina waxay ku taal waraaqo cagaaran, mana garanayo cidda uu yahay. ama sidee ku gaadhay. Qof ma ii sheegi karaa sida loogu rakibay xiriirkayga Telegram? Mahadsanid.
Ku jawaab Rafa Vidal
Salaan Rafa! Ma hubo, waxaa laga yaabaa inay si sax ah u tahay, inay tahay isticmaale aan la garanayn, sidaa darteed, kuma lihid buuggaaga oo waxay u muuqataa mid cagaaran. Iyo inuu kugu daray magacaaga isticmaale, oo uusan ku darin lambarka taleefankaaga. Su'aalo kasta, xiriiriyahani waa meesha ugu habboon ee laga bilaabi karo: https://telegram.org/faq/es
Firefox 66 waxay timid iyadoo fiidiyoow otoplay xayiraya iyo inbadan
Solus 4: nooca cusub ee 'distro' ee leh isbeddelada Budgie iyo xirmooyinka kale